March 2020 - Boga Wise Man
Nolol | Sheeko
Roob iyo Sonkor – Qaybtii 4aad
Waxaan is idhi waxba ha la murmin. Waan ka cudur daartay oo waanan ka yara kacay. Dibada ayaan u baxay inyar. Waxaan is weydiiyey sidaan uga dabaalan lahaa. Waxuunbaa igu yidhi inanta u yara deji way is qaban doontaa oo kuguma sii adkeyn doonto way isku yara buuqsantahay kolay way kala degaysaa mardhaw. Haka hor […]
Roob iyo Sonkor – Qaybtii 3aad.
Maryam ayaa I weydiisay su’aasha. Iyadoo cadhaysan ayay I tidhi “maxaad u tidhi miyaad keligii ku koobantahay?” Sida adage ee ay su’aasha ii weydiisay ayaan ana intaan ka gubtay ku idhi “Waa wax la wada ogyahay inaan habluhu nin keliya la sheekaysan ee illaa maalintay guri yeelanayaan maalinta ka horeysa lasii hadlaan rag kala duwan” […]
Ardayda Xisaabta iyo Kuwa Falsafada.
Xisaabta iyo Falsafada waxa la yidhaa waa laba maado oo mataano ah ama carrab iyo labadiisa daan. Balse ardayda barta markaad eegto labadan maado aad bay ukala duwan yihiin. Waxa tusaale inoogu filan sida ay ardayda Xisaaba ka dhigta heerka jaamacadeed in ay aad uga duwan yihiin kuwa Falsafada jaamacad ka dhigta jaamacada dhanka dad […]
Jacaylkii Koobaad – Cutubka Labaad – Qaybtii 22aad.
Cabdirisaaq markii uu soo fadhiistay miiska ayuu indhaha kusii daayay Sagal oo rabta inay fadhiisato kursiga oo diraceedii soo ururinaysa. Cabdirisaaq waxa wakhtigaas olol aanu hore isugu ogeyn ku sii shidmay wadnihiisa. Sagal iyaduna way la socotaa in indhahiisu sida laser-ka ama leebka ugu soo maqanyihiin laakiin waxay iska dhigtay inaanay lasocon. Markuu ka bogtay […]
Gumeysiga Qalinka iyo Ribada
Marka dhaqaalaha dawladaha horumaray hoos u dhaco waxyaabaha ay kula tacaalaan waxa kamida inay hoos u dhigaan xadiga ribada ee ay bangiyadooda dhexe dejiyaan. Tusaale ahaan maantoo kale, bangiga dhexe ee Ingiriisku waxa uu xadigii ribada ee ahaa 0.75% ka gooyey 0.5% waxaanu geeyey xadiga ribada 0.25%. Xaddigani wuxuu tilmaamayaa qiimaha ay bangiyadu lacagta kaga […]
Dawlad Noocee Ah Ayaan Jeclaan Lahaa
Dawlad Noocee Ah Ayaan Jeclaan Lahaa. Marmarka qaar sidaad u fikirayso ayay markeliya wax kuu kala cadaadaan. Sidaad ogtihiina waxaan jecelay inaan is weydiiyo su’aalo kala gedisan kuwaas on idinkana idinla wadaago marmar. Maalin baan hadaba is weydiiyey maadaama ay dawladu tahay mid u adeegta bulshada, dawlad noocee ah ayaan shakhsi ahaan jeclaan lahaa anigu. […]